China CH Standard Chemical Process Pump sy orinasa mpanamboatra | Convista
Ny paompy CH, paompy centrifugal cantilever tokana tokana mitsivalana, dia paompy mahomby avo lenta izay mampiditra tombony amin'ny paompy injeniera simika marobe mifanaraka amin'ny Famaritana ara-teknika ho an'ny paompy sentrifugal (Kilasy II) GB / T 5656- 2008 (mitovy amin'ny ISO5199: 2002). Ahitana modely efatra toy izao mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fandidiana:
Modely CH (impeller mihidy sy famehezana mekanika)
Modely CH (impeller semi-open sy famehezana mekanika)
Modely CHA (famehezana mihidy sy fanamafisam-peo)
Modely CHOA (famehezana semi-misokatra ary famehezana impeller mpanampy)
Izy io dia mihatra amin'ny toe-java-miasa toy izany ho an'ny fanadiovana madio na sombin-javatra, manimba ary mitafy amin'ny sehatra toy ny arina, ny sira, ny injeniera petrochemical ary ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fanaovana taratasy, ny fanafody ary ny sakafo, manokana ny fanapoizinana misy poizina, mora tefoina, mipoaka ary mahery. toy ny saha toy ny soda ionic membrane ionic, fanaovana sira, zezika simika, fitaovana osmosis miverimberina, fanamainana rano anaty ranomasina, fitaovana MVR, ary fitaovana enti-miasa amin'ny tontolo iainana.
Mikoriana: Q = 2 ~ 2000m3 / h
Loha: H ≤ 160m
Fanerena miasa: P ≤ 2.5MPa
Mari-pana miasa: T <150 ℃
CH --- Kaodin'ny andian-pump
250 --- savaivony miditra
200 --- savaivony outlet
500 --- savaivony nom an'ny impeller
Tanjona famoronana: fahombiazana avo lenta, fitehirizana angovo, ary fiasa azo antoka ary azo antoka ho an'ny androm-piainana maharitra.
1. Fahombiazana avo lenta sy fitsitsiana angovo: mifototra amin'ny fiparitahana vaovao, ny maodelim-by dia vitaina aorian'ny fampiharana sy fanatsarana miverimberina miaraka amin'ny famakafakana ny sahan-doha miaraka amin'ny rindrambaiko ANSYS CFX. Ny andiam-paompy dia misy fiolahana fampisehoana, lohan-tsofina miabo tsara mihena, avo lenta.
2. Firafitra nohamafisina: amin'ny fampiasana shafting mavesatra dia atsangana araka ny tokony ho izy ny savaivony sy ny elanelana misy azy, miaraka amin'ny hamafin'ny hery sy ny tanjaka, izay ahafahan'ny fiasa maharitra sy azo antoka mandritra ny androm-piainana maharitra; ho an'ny fiterahana, fampiakarana ny fahaiza-miteraka ary kely ny enta-mavesatra, manalava ny androm-piainan'ny fiterahana.
3. famehezana samihafa
Araka ny endri-javatra misy ny medium, ny tombo-kase tombo-kase dia misy: tombo-kase mekanika sy tombo-kase hydrodynamika, ny teo aloha izay mbola mizara ho tombo-kase mahazatra sy sombiny.
Previous: 2108 AWWA C504 C516 Valin'ny lolo hoentina roa
Manaraka: 2105 EN 593 Valizy lolo lolo roa heny
3914 OS&Y Valve am-baravarana metaly
Valve fanamarinana fitrandrahana etona
1209 1210 Valve valve